Nepal Dayari | विदेशबाट फर्कदा कति सुन ल्याउन पाइन्छ ? लागू भयो नयाँ प्रावधान
विदेशबाट फर्कदा कति सुन ल्याउन पाइन्छ ? लागू भयो नयाँ प्रावधान
भाद्र २६, २०७८ शनिबार ९६५ पटक हेरिएको
विदेशबाट आउने नेपालीले एक पटकमा १०० ग्रामभन्दा बढी सुन ल्याउन नपाउने भएका छन् । भन्सार विभागले विदेशबाट ल्याइने १०० ग्रामभन्दा बढी काँचो सुन ल्याएमा जफत हुने बताएको हो ।
विभागले काँचो सुन ल्याउँदा ५० ग्रामको भन्सार महसुल ९५० रुपैयाँ लाग्ने बताएको छ । यसपछि बाँकी ५० ग्राममा ०५० महसुल लाग्ने समेत बताएको छ । एक पटकमा विदेशबाट १०० ग्रामभन्दा बढी सुन ल्याएमा तोकिएभन्दा बढी सबै सुन जफत हुनेछ ।
गैह्रकानुनीरुपमा कुनै पनि नेपालीले काँचो सुन र चाँदी ल्याउन पाउने छैनन् । यदि कसैले ल्याएको फेला परेमा त्यस्तो सुन/चाँदी जफत गरेर त्यसको मूल्य बराबर जरिवाना हुने विभागले जनाएको छ । यस्तै, १० लाखभन्दा बढी मूल्यको सुन ल्याएमा कैद सजाय समेत हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, नेपाली र गैर आवासीय नेपालीले ५० ग्रामसम्म सुनको गहना, ५०० ग्रामसम्म चाँदीको गहना र १ लाख रुपैयाँसम्मको जवाहरात जडित सुन वा चाँदीका गहना ल्याउन पाउँनेछन् ।
यसअघि व्यवसायीहरुले मागअनुसार सुन आयात नहुँदा सुन व्यापार प्रभावित भएको भन्दै सुनको आयात कोटा बढाउन आग्रह गरेका थिए। सुन व्यवसायीको आग्रहअनुसार नै सुन आयातको सीमा बढाइएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए। हाम्रो सन्देश बाट